उनलाई आफु मा’रिदैछु भन्ने थाहा थियो ? श्रीमतीकै योजनामा ह’त्या गरिएका दुलालको फेसबुक स्टाटसले सबैलाई झस्कायो – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/उनलाई आफु मा’रिदैछु भन्ने थाहा थियो ? श्रीमतीकै योजनामा ह’त्या गरिएका दुलालको फेसबुक स्टाटसले सबैलाई झस्कायो
उनलाई आफु मा’रिदैछु भन्ने थाहा थियो ? श्रीमतीकै योजनामा ह’त्या गरिएका दुलालको फेसबुक स्टाटसले सबैलाई झस्कायो
जेठ । आफ्नै श्रीमतिद्धारा मा रिएका विराटनगरका औषधी व्यवसायी देवीप्रसाद दुलालले ह त्या हुनु अघि लेखेको फेसबुक स्टाटसले शंका उब्जाएको छ । अन्य दुई सहयोगीको साथ लिएर श्रीमतिले नै दुलालको ह त्या गरेकी थिइन् । ह त्याको मुख्य योजनाकार श्रीमती मिना श्रेष्ठ दुलाल रहेको र ह त्यामा गर्ने विराटनगरकै ब्रह्मदेव साह र इटहरी १२ खनारका सोनु साह छन् ।
मृ तक दुलालले मे ५ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘कोरोनासँग लड्ने हो, डराउने होइन । श्रीमतिसँग डराउने हो लड्ने होइन, किनभने दुबैको अहिलेसम्म औषधी बनिसकेको छैन ।’ यो स्टाटसबाट श्रीमतिबाट आफूमाथि खतरा भै रहेको संकेत दुलाललाई थियो भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । उनले रमाइलोका लागि पनि यो स्टाटस लेखेका हुनसक्छन् ।
श्रीमतीसँगको सम्बन्ध थाहा पाएका कारण श्रीमान्–श्रीमतीमा बेमेल थियो । आफ्नो श्रीमानले गरेको व्यवहार मीनाले ब्रम्हदेवलाई सुनाउँथिइन् । उनले श्रीमानलाई सबक सिकाउने योजना रहेको बताउँथिइन् । ब्रम्हदेवले गत माघमा विवाह गरेको थिए । तर मीनासँगको संवाद निरन्तर चलिरहेको थियो ।
शनिबार राति एउटा बेडमा श्रीमती मीना र ८ वर्षीय छोरा सुतेका थिए । दुलाल छुट्टै बेडमा सुतेका थिए ।
ह’त्याको पूर्व योजनासहित मीनाले बोलाएपछि शनिबार राति ब्रम्हदेव र सोनु डोरी र ह’त्याका लागि प्रयोग हुने सर्जिकल ग्लोब्स लिएर आएका थिए । फिङ्गर प्रिन्ट देखिने डरले उनीहरूले ग्लोब्स लगाएका थिए ।
ह त्याका क्रममा संघर्ष चल्दा दुलालको घाँटीमा गहिरो डाम बसेको थियो । डाम देखिएपछि छोप्न भन्दै मीनाले एक बट्टा पोन्ड्स पाउडर लगाइदिइन् । ११ बजेदेखि करिब आधा घण्टाको प्रयासमा दुलालको ज्यान गयो । तर ह त्यापछि तीनजना दुई बजेसम्मसँगै बसे ।
सरकार र डा. केसीबिच सहमति, आज अनशन तोड्ने